फ्रान्समा एकैदिन १३ सय ५५ को मृत्यु, कति छन् संक्रमित ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः फ्रान्समा कोरोना भाइरसका कारण एकैदिन १ हजार ३ सय ५५ को मृत्यु भएको छ ।
एक दिनमा मृत्यु हुने संख्यामा यो अहिलेसम्मकै उच्च भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । यसअघि अमेरिकामा एक हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस दमकको जामे मस्जिदका १४ जनाको आरडिटी परीक्षण ‘नेगेटिभ’
बिहीबार फ्रान्समा २ हजार १ सय १६ कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् । योसँगै फ्रान्समा कोरोना संक्रमितको संख्या ६० हजार नाघेको छ भने ५ हजार ३ सय ८७ ले ज्यान गुमाएका छन् ।
कुन देशमा कतिको मृत्यु भयो ? कति संक्रमित छन् ? सूचीसहित हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः
याे पनि पढ्नुस अमेरिकामा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने संख्या १ हजार नाघ्यो